Iinkqubo zoKondla i-Smart Saver Coil China Manufacturer
Inkcazo:Ukondla kunye nezixhobo zokuPhatha i-Coil,Inkqubo yokuqhubekeka kwekhoyili,Cofa kwiinkqubo zokondla
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Iinkqubo zoKondla i-Smart Saver Coil
Umzekelo No.: MAC4-600F
Iinkqubo zoKondla i-SmartSaver Coil feeds zezinto ezinamandla aphezulu ziyilelwe ukwenza isitya esinobunzima obunamandla obunzima obungaphezulu kwe-400Mpa. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Bona afaneleka ngokupheleleyo ukwenziwa kwezinto zokusebenza kwakunye processing of izinto eziphakamileyo-amandla, nkqu kwizintlu eziphezulu strip thickness.With iinkqubo zethu ngci coil unako ukusebenza ububanzi izinto coil ukusuka 400mm ukuya 1800mm, coil okusuka 0.6 -9.0mm, ubunzima bekhoyili ukuya kuthi ga kwi-25000kgs.
Uluhlu lweemveliso zethu luqonda imigca yokutya egcwele kwikhoyili eqhelekileyo kunye noyilo lwe compact, yokondla kwezinto zekhoyili koomatshini bokushicilela kunye nemigca yokufaka profiling.
Icandelo leZithuthi: I-Bracket, iDamper, iBarke Pad, iThaveni yeTie, iiFesi zoMbane, iiShell zeePrinta, isakhelo seKhompyuter, Isaladi yeSitayile seNdawo yeZithuthi, iSplash Shield yomzimba wemoto njl njl.
Iinkqubo zoncedo lwe-MAC4 ze- SmartSaver Coil zisebenza kumzi mveliso wethu wabathengi.
Iinkqubo zoKondla i-SmartSaver Coil zoKondla ngokwenza umgca wokutya wephepha lomgaqo-siseko.
Lo matshini usebenza ngokusebenza kumzi-mveliso omnye wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U ngeeNkqubo zeSibonelelo seFayile se-SmartSaver.
Ukondla kunye nezixhobo zokuPhatha i-Coil Inkqubo yokuqhubekeka kwekhoyili Cofa kwiinkqubo zokondla Ukondla kunye nokuphatha i-Coil Cinezela ukondla kunye nezixhobo zokuphatha iikhoyili Cinezela ukondla kunye nomatshini wokuphatha i-Coil Izixhobo zokuphatha i-Metil coil Ukulungiswa kwekhoyili kunye nezixhobo zokubamba